Tirada na soo booqday.	Maanta12488shalay45579Isbuucaan12488Isbuucii hore319617Bishaan769403Bishii hore985537Maalmaha oo dhan4587573Hadda Waxaa toos ugu jiraan: 321 guests, 3 members Your IP: 54.226.5.29 , Today: May 19, 2013	Shariif Shiikh Axmed: ‘’Beesha Caalamka waxay noola dhaqmi jireen sidii in aan gumaysi ku jirno’’, iyo Qaramada Midoobay oo Arintaas Cadaysay.
Written by Maamul on 17 September 2012. Shalay waxay ahayd maalintii ugu dambeysay ee Shariif xilka laga xayuubiyo, wuxuu jeediyay khudbad ciil Waad Mala Habowdaye Madaxweyne Soo Baro.. (MAQAAL) By Xasan Fayooke Written by Maamul on 17 September 2012. Tan iyo isniintii la soo dhaafay (10 September 2012ka) waxaa saxaafadda Af-Soomaaliga ku hadasha hareeyey U kaca Difaaca Nabiga scw (Kelimad Maqal ah oo Muhiim ah) Ustaad Bile Bilaal (DHAGEYSO)
Written by Maamul on 17 September 2012. Assalaamu Calaykum. Ikhwaanii fillah:- Kelimadaan waxaan uga hadlaynaa Difaaca Nabiga scw waxaana si Dhiigbaxa ciidamada NATO oo sii kordhay iyo Mareykan oo ku baaqay in xaalka dib loo eego.
Written by Maamul on 17 September 2012. Iyadoo ay mudooyinkii ugu dambeeyay si aad ah isu soo tarayeen dilalka qorsheysan ee ciidamo ku labisan Saliibiyiintii Nabigeena caayay oo Siminaar u furay Saxafiyiin Soomaaliyeed!!. (Warbixin) Written by Maamul on 17 September 2012. Hey’adda caalamiga ee Mareykanka u faafisa Dimuqraadiyadda ee la yiraahdo National Endowment For Democracy
Deg Deg: Diyaarad Dagaal oo goordhoweyd lagu soo riday deegaanka Biibi iyo dagaalkii oo hadda Qaboobay
Written by Maamul on 17 September 2012. Dagaal culus ayaa dib ugu qarxay deegaanka Biibi oo dhacda 45 KLM Bariga Afmadoow, dagaalkaas oo Askar ka tirsan Dowladda Federaalka oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho.
Written by Maamul on 17 September 2012. Xoogag bastoolado ku hubaysan ayaa xalay toogasho ku dilay Askari ka tirsan DF, iyadoo xoogagii WAR DEG-DEG AH: Qaraxyo goordhow gilgilay qeybo ka mid ah Magaalada Muqdisho.
Written by Maamul on 17 September 2012. Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Qaraxyo kala duwan goordhow laga Qaraxyo khasaare dhaliyey oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Written by Maamul on 17 September 2012. Qaraxyo khasaare dhaliyey ayaa xalay ka dhacay nawaaxiga Iskuulka Jubba Xaafada Towfiiq Degmada Askari ka tirsan Dowladda Federaalka oo lagu dilay magaalada Marka.
Written by Maamul on 17 September 2012. Askari ka tirsan Dowladda Federaalka ee ku sugan magaalada Marka ayaa xalay lagu dilay magaalada Deg Deg: Sarkaal Sare oo ka tirsanaa PS-ta oo uu dhalay Sheikh Nuur Baaruud Gurxan oo goordhoweyd lagu dilay Muqdisho
Written by Maamul on 15 September 2012. Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaalo culus oo xalay Deegaanada duleedka magaalada Muqdisho Start«81828384858687888990»End	Si Fudud ubaro Qur'aanka Adigoo Joogo Gurigaaga Online Riix Halkan